Qofkii Ku Qanciyey Inuu Arsenal Yimaado, Booska Uu Ka Ciyaarayo, Koobka Uu Doonayo Inuu Ku Guuleysto Iyo Willian Oo Bixiyey Waraysigii U Horreeyey - Gool24.Net
Qofkii Ku Qanciyey Inuu Arsenal Yimaado, Booska Uu Ka Ciyaarayo, Koobka Uu Doonayo Inuu Ku Guuleysto Iyo Willian Oo Bixiyey Waraysigii U Horreeyey
Xiddiga reer Brazil ee Willian ayaa bixiyey waraysigiisii ugu horreeyey markii uu qalinka ku duugay heshiis saddex sannadood ah oo uu ugu wareegay Arsenal maanta oo Jimce ah, waxaanu ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan kooxdiisa cusub, waxa uu ka filayo inay ku guuleystaan iyo kooxdiisii hore ee Chelsea.
32 jirkan reer Brazil oo Arsenal u xidhan doona No.12, waxa uu mushahar u qaadan doonaa lacag dhan £220,000 Gini toddobaadkii, isaga oo ak mid noqon doona ciyaartoyda ugu mushaharka badan Arsenal.
Willian oo u warramay Arsenal Digital markii uu heshiiska saxeexay ayaa waxa uu sheegay in sababta ugu weyn ee uu Arsenal u yimid ay tahay tababare Mikel Arteta iyo qaabka ay kooxdu u ciyaarto, waxaanu yidhi: “Waxaan jecelahay sida ay u ciyaaraan, wax kastaana waa cajiib xataa garoonka, waxayna ila tahay in Arsenal oo haysata Arteta ay fursad weyn u haystaan inay u dagaallamaan horyaalka Premier League iyo tartamada Yurub, sidaa darteed waxaan u faraxsanahay arrintaas darteed.
“Waxa aan xiisaynayaa bilowga xili ciyaareedka. Waxa aan sugi kari la’ahay inta aan garoonka tegayo ee aan qabsanayo shaqadayda ah inaan caawiyo ciyaartoyda, kooxdana ka saacido inay mar kale iftiinto. Taas ayaa ah waxa aan doonayo.”
Willian waxa uu intaas kaddib sheegay in wada-hadal dhex-maray Mikel Arteta uu ku qanciyey inuu Arsenal kusoo biiro, waxaanu yidhi: “Markii aan la hadlay Mikel, sheekadaydu way wanaagsanay, waxaanu isiiyey kalsooni aan ku imaaddo Arsenal. Wuxuu ii sheegay waxyaabo badan oo wanaagsan, waana taa sababta aan u imid Arsenal.”
Willian oo la weydiiyey booska uu doonayo inuu uga ciyaaro kooxdiisa cusub ee Arsenal ayaa waxa uu ku jawaabay: “Haha, taasi wa su’aal adag, mana garanayo! Waxa aan jawaabta u deynayaa Arteta (booska uu ka ciyaarsiinayo). Waxa aan halkan u imid inaan boos walba ika ciyaaro.
“Waxaan ka ciyaari karaa dhinaca midig, waxaan ka ciyaari karaa dhexda, waxaan sidoo kale ka ciyaari karaa dhinaca bidix. Sidaa darteed, waxaan doonayaa inaan ka caawiyo boos walba oo ay i geeyaan oo aan ka ciyaaro. Waxa aan isku dayi doonaa inaan sida ugu wanaagsan ugu ciyaaro.”